‘धुर्मुस–सुन्तली’को नमुना बस्तीमा यसरी हुँदैछ ‘रामकहानी’को छायाँकन (फोटोफिचर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
‘धुर्मुस–सुन्तली’को नमुना बस्तीमा यसरी हुँदैछ ‘रामकहानी’को छायाँकन (फोटोफिचर)
काठमाडौं । धुर्मुस सुन्तलीले निर्माण गरेको एकिकृत नमुना सन्तपुर बस्ती, रौतहटमा चलचित्र ‘रामकहानी’ को गीत छायाँकन गरिएको छ ।
सुदर्शन थापाको निर्देशनमा बनिरहेको चलचित्र छायाँकनको अन्तिम चरणमा छ । यसै क्रममा चलचित्रमा समावेश पहिलो गीतको छायाँकन ५ दिनदेखि चलिरहेको छायाँकन हो । यहाँ अझै २ दिन लगाएर यो गीतको छायाँकन गरिनेछ । चलचित्रका मुख्य सबै कलाकारहरुले यो गीतमा नृत्य गरिरहेका छन् । बस्तीलाई अझै धेरैले हेरुन् भन्ने उद्देश्यले चलचित्रको गीतको छायांकन गरिएको कलाकार कुञ्जना घिमिरेले बताइन् ।
निर्देशक सुदर्शन थापाले चलचित्रमा समावेश यो गीतको भिडियो दर्शकका लागि विशेष हुने बताए । उनले सन्तपुर बस्तीमा गीत छायाँकन गर्न पाउँदा खुशी लागेको प्रतिक्रिया दिए । कविराज गहतराजले कोरियोग्राफी गरिरहेको गीतमा पूजा शर्मा, आकाश श्रेष्ठ, केदार घिमिरे, विल्सनबिक्रम राईले एकसाथ कम्मर मर्काइरहेका छन् । कविराजले यो गीतको कोरियोग्राफी आफ्ना उत्कृष्ट कोरियोग्राफीको सूचीमा पर्ने बताए । अर्जुन पोखरेलको शब्द तथा संगीत रहेको ‘तिम्रो लागि म छु दुनियाँ छोडिदेऊ’ बोलको गीतमा सुगम पोखरेल र अञ्जु पन्तको स्वर छ ।
भदौ २२ गतेलाई प्रदर्शन मिति तोकिएको ‘रामकहानी’को एउटा गीत र केही दृश्यहरु खिच्न बाँकी छ ।